January 19, 2022 - Channel Lover
ပုလဲ-PDFခေါင်းဆောင် ဗိုလ် နဂါးကို ကျပ်(၅၈၅)သိန်း လှူဒါန်း
January 19, 2022 by Channel Lover
ပုလဲ-PDFခေါင်းဆောင် ဗိုလ် နဂါးကို NUGဝန်ကြီးများနှင့် နိုင်ငံတကာအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းအလှူ ရှင်များက ကျပ်(၅၈၅)သိန်း လှူဒါန်း ဧရာဝတီတိုင်းမ် ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ-NUG၏ ဝန်ကြီးများ နှင့် နိုင်ငံတကာအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းအလှူရှင်များက ပုလဲ -PDF ခေါင်းဆောင်ဖြင့် ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်နှင့် ၁၆ ရက်တွင် အွန်လိုင်းမှတဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း NUGအစိုးရနှင့်နီးစပ်သည့်သတင်းရင်းမြစ်များက ဖော် ပြသည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ NUG အစိုးရ ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီးများဖြစ်သည့် ဒေါက်တာ ဝင်မြတ် အေးနှင့် ဦးစိုးသူရထွန်းတို့ပါဝင်တက်ရောက်ပြီး နိုင်ငံတကာအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလှူရှင်များ ၁၇ ဖွဲ့က ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းကဲ့သို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက် ပုလဲ- PDF ခေါင်း ဆောင် ဗိုလ် နဂါးကို အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများမှ ငွေကျပ် (၅၈၅)သိန်းလှူဒါန်းပေးခဲ့ပြီး ပုလဲစစ်ဘေးရှောင်များအတွက် NUG … Read more
သမီးမိုက်မဖြစ်စေနဲ့ ( အရမ်းကောင်းလို့ဖတ်စေချင်) စာဖတ်မပျင်းပါနဲ့ ဖတ်ကြည့်စေ ချင်ပါတယ် ။ ညီမလေး တို့ရေ ဆင်းရဲတဲ့ လင်မယား ၂ ယောက်မှာ စာတော်တဲ့ သမီးလေး ရှိတယ် ၊ တစ်နေ့ သမီးလေးဟာ အတန်းတင် စာမေးပွဲမှာ ပထမ ရတယ် ။ အဖေဟာ ဝမ်းသာလွန်း လို့ လိုချင်တာဝယ်ပေးမယ် ပြောတယ် ။သမီးလေးဟာ သိပ်လိုချင်ခဲ့ပေမဲ့ အဖေမှာ ပိုက်ဆံ မရှိမှန်းသိလို့ မပူဆာခဲ့တဲ့ အဝတ်အစား တစ်စုံကိုလိုချင်တယ်လို့ ပြောလိုက် တယ် ။ နောက်တစ်နေ့မှာ အဖေဟာ သမီးလေး လိုချင်တဲ့ အဝတ်တစ်စုံကို ပေးလိုက် တယ် ၊ သမီးလေးဟာ ဝတ်ကြည့်ပြီး မှန်ရှေ့မှာ ပျော်လို့ ၊အဖေ ကလည်း သမီးလေးကို … Read more
တစ်ပွဲစား ကြင်စိုး။ ဟုတ်တယ် တစ်စားပွဲတည်း အတူစားမိတဲ့လူတွေက သူနဲ့ ထပ်မစားချင်။ တခါဆက်ဆံ ဆယ်ခါလန် ဆိုတာ ဘိုပုလို လူစား။ ဘိုပုက ရှေးကံ‌ မဆိုသလောက် ကောင်းခဲ့တယ်။ တသက်လုံး ကပ်တီးမူးလဲ လုပ်ရင်း နိုင်ငံ့ အာဏာကိုပါ ဘတ်ကီးဆွဲထားတာ။ ဆိုတော့ အရာရာကို ဖလှာကြိတ်တဲ့ ဝသီ ဖျောက်မရ။ ဘော်ဒါကြီး လဖက်၆ ကလည်း အချောင်ကြိုက်။ အစ္စရေး လော်ဘီ အငှားမှာ စတွေ့တယ်။ Cash down ပေးမယ် ဂျင်းပြီး ဟိုဘဲရောက်လာတော့ ကျောက်စိမ်းတုံးနဲ့ လဲမယ်လုပ်တာကိုး။ ကျောက်စိမ်းက ဦးပိုင် ဂိုဒေါင်ထဲမှာ အပြည့်လေ။ Lord of war ထဲမှာ နစ်ကိုးလပ်စ်ကေ့ကြီး ကို စိန်နဲ့ လက်နက် လဲခိုင်းသလိုပေါ့။ … Read more
ကနေဒီတောင်ပေါ်မှာ စစ်ကောင်စီ ၁၂ ယောက်လေထီးနဲ့လာချရာ လေထီးမဖွင့်နိုင်လို့ တစ်ယောက် ချောက်ထဲကျ
ကနေဒီတောင်ပေါ်မှာ စစ်ကောင်စီ ၁၂ ယောက်လေထီးနဲ့လာချရာ လေထီးမဖွင့်နိုင်လို့ တစ်ယောက် ချောက်ထဲကျ ချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန်မြို့နယ် ကနေဒီတောင်ပေါ်က တပ်ကင်းစခန်းမှာ ဒီနေ့ ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက် နေ့လည် ၁နာရီခွဲလောက်က ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးနဲ့ စစ်ကောင်စီ ၁၂ ယောက်ကို လေထီးနဲ့လာချသွားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်ကနေ ၁၂ ယောက် လေထီးနဲ့ခုန်ချရာ တစ်ဦးက လေထီးမဖွင့်နိုင်တာကြောင့် ချောက်ထဲကျသွားတယ်လို့လည်း ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေထံကသိရတယ်။ ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့က တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက “အဲ့သတင်းမှန်တယ်တဲ့။ သူတို့က အထုပ်တွေနဲ့ ဆင်းလာကြတယ်တဲ့။ အဲ့စခန်းက ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေက ဝိုင်းထားတာ ၃ လကျော်ကြာပြီဆိုတော့ ရိက္ခာလည်းမရှိတော့ဘူး။ ရေလည်း အောက်ဆင်းပြီး ခတ်လို့မရဘူး။ ထွက်ပြေးတဲ့သူလည်းများတယ်လေ။ ဒါကြောင့် ရိက္ခာကော အင်အားကော လာဖြည့်တာနေမယ်” လို့ပြောပါတယ်။ ကနေဒီတောင်ဟာ ဗျူဟာကျတဲ့ တောင်ကုန်းဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီနေရာကနေ … Read more
ကျားပါးစပ် စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲ ဗီဒီယိုဖိုင် KA ထုတ်ပြန် (ရုပ်/သံ)
စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃၂ဦး သေဆုံးသည့် ကျားပါးစပ် စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲ ဗီဒီယိုဖိုင် KA ထုတ်ပြန် (ရုပ်/သံ) ဧရာဝတီ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၂၂ ကယားပြည်နယ်(ကရင်နီပြည်)၊ မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ်၊ သံလွင်မြစ်အရှေ့ဘက်ခြမ်းရှိ နတ်တောင်စခန်းခေါ် ကျားပါးစပ်ကြီးတပ်စခန်းအား ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်နေ့က တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်စဉ် စစ်ကောင်စီဘက်က ၃၂ ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း ကရင်နီတပ်မတော်(KA) က ယနေ့တွင် ဗီဒီယိုဖိုင်နှင့်တကွ ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ အဆိုပါ စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွင် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၀ ဦးလက်နက်ချအဖမ်းခံခဲ့သော်လည်း စစ်ကောင်စီက ဂျက်တိုက်လေယာဉ်နှစ်စီးဖြင့် ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်သဖြင့် ဖမ်းမိထားသည့် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအပြင် KA ဘက်က ၂ ဦးသေဆုံးကာ ၆ ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းလည်း KA က ဆိုထားသည်။ စစ်ကောင်စီဘက်မူ ဟွေပုံလောင်း-ကောက်ကောက်ဒေသရှိ ကျားပါးစပ်ကြီးစခန်းအား ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP)နှင့် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်(PDF)များက … Read more
မနေ့ညက ကုလအစည်းအဝေးမှာ အားရစရာကောင်းခဲ့တဲ့ နိုင်ငံကြီးများ၏ တင်ပြချက်အချို့…SeeMore
မနေ့ညက ကုလအစည်းအဝေးမှာ အားရစရာကောင်းခဲ့တဲ့ နိုင်ငံကြီးများ၏ တင်ပြချက်အချို့ ….. UN meeting ပြင်သစ်က ထပ်ပြောလိုက်ပါပြီ UN ကထုတ်ခဲ့တဲ့ Statement တွေ/ စကားလုံးတွေဟာ သိပ်ကို ဩဇာကြီးလှပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က မမှုပါဘူးတဲ့ ဒီထက်ပိုတဲ့ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ချက်ချင်းလုပ်မှ ရပါတော့မယ်တဲ့(We are wining guys!!!) ရုရှား ရုရှားကတော့ လုံးဝကိုစကားမပြောချင်တော့ပေမဲ့ မအလရဲ့ လုပ်ရက်တွေကို လက်ရှောင်လိုက်ပါပြီပြောကြားချိန် ၁ မိနစ်တောင်မပြည့်ပါဘူး….. US ကတော့ ပြောလိုက်ပါပြီ စကားလုံးတွေ၊ Statements တွေနဲ့ မရတော့ပါဘူးတဲ့ Action လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှကို ရတော့ပါမယ်တဲ့။ သိပ်ကို ပြည်သူတွေကြားချင်နေတဲ့ စကားကို ပြောကြားသွားတာပါ သူ့နောက်ကို တစ်ခြားနိုင်ငံတွေက ပါလာရင်ကို ရပါပြီ အိန္ဒိယ အိန္ဒိယကတော့ … Read more